NEZVEDU - Xishun Plastics Factory
KANZA ZVAKARERA ACRYLIC SHEET
EXTRUDED PAMWE ACRYLIC SHEET
DZIMWE PATTERN ACRYLIC SHEET
ACRYLIC YAKITWA ZVINHU
Xishun Plastics yakavambwa muna 1996, inogadzira, kutengesa, kugadzirisa acrylic sheet seimwe yemabhizinesi ane-akazara. Xishun plastiki ine extrusion giredhi giredhi kugadzirwa chirimwa, kukanda giredhi ndiro yekugadzira chirimwa uye acrylic process process plant, yayo brand GARY, yakatengesa zvakanaka munyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu, uye rave bhizinesi rakakosha mukugadzirwa kweplate yePMMA. Hunhu hwayo uye mushure mekutengesa sevhisi yakarumbidzwa uye inozivikanwa nevanhu vari muindasitiri iyi. Xishun Plastics inosvitsa yakavimbika tekinoroji uye kugadzirwa manejimendi ruzivo kumba nekune dzimwe nyika. Mishonga mikuru ndeye PMMA sheet (extrusion giredhi, giredhi rekukanda), MMA monomer uye acrylic maoko emaoko, umo mahwendefa anogona kugadzirwa mune akasiyana zvirevo uye mavara zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Mushure memakore ebudiriro, fekitori yedu inofambirana nenguva, inoomerera kune bhizinesi manejimendi chinangwa che "yakakura uye yakadzama, inokunda-inokunda budiriro", yakasimba tekinoroji simba, inovavarira kupona nemhando, inovavarira budiriro nesainzi uye tekinoroji, uye inovavarira budiriro nematarenda. Ita kuti fekitori yedu ichengetedze yakanaka yekusimudzira mumakwikwi emusika. Chiyero chefekitari chinowedzera gore negore, uye kubatsirwa kwehupfumi kunowedzera gore negore.
Zvaunoda, kuziva kwedu! Isu tinovimbisa: "sevhisi yekufunga, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mitengo yakasarudzika", gara uchinamatira kune "mhando yekutanga, mutengi kutanga" chinangwa, kukupa iwe zvigadzirwa zvakanaka.
Kuwedzera musika ndicho chinangwa chedu, isu tichavandudza mwero webasa, kuyedza kugadzira kukosha kwechigadzirwa, isu takagadzirira kusimbisa kutaurirana, kubatana kwechokwadi, kusimudzira kwakafanana, uye kubatana maoko kugadzira ramangwana riri nani.
Iine makore anopfuura makumi maviri nemana ruzivo, XISHUN acrylic yakahwina mukurumbira wakanaka wehunyanzvi hwedu uye kunaka kwechigadzirwa. Kana paine chero mukana wekuti isu tichabatana mune ramangwana, XISHUN ichave nechivimbo kuve mudiwa wako akavimbika!
No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd.,Lunjiao, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province
INOWANIKWA NA8AM KUSVIKA 18PM
Kero: No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd.,Lunjiao, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province
Runhare: +86 0757 27886999